Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa – Kalfadhi
Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, wuxuu ku dhashay degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose sanadkii 1954-kii. Muddo dhowr iyo toban sano ah ayuu xubin ka yahay baarlamaanka. Magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur-galbeed ayaa mar kale laga soo doortay bishii Nofeember ee sanadkii 2016.
Waxbarashada & Takhasuska
Degmada uu ku dhashay oo uu ku soo barbaaray ayuu ku soo qaatay waxbarashadiisii hoose-dhexe. Dugsiga sare ee 15 May ee Muqdisho ayuu ka baxay sanadkii 1978. Kulliyadda luuqadaha ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ayuu ka qalinjebiyay 1982-kii. Heerka labaad ee shahaadada jaamacadda wuxuu ka qaatay luuqadaha oo uu ka diyaariyay Machadka Caalamiga ah ee Khartuum ee dalka Suudaan.
Sanadihii u dhaxeeyay 1985-87 wuxuu kaaliye macallin ka soo noqday Jaamacadda Ummadda, isagoo sanad kaddibna macallin ka noqday kulliyadadaha saxaafadda iyo luuqadaha ee Jaamacadda Ummadda.
Wuxuu xisaabe guud ka soo noqday mashruucii Damaanyo ee dhismaha hoggaanka ciidanka xoogga horraantii siddeetamaadkii.
Markii ay burburtay dowladdii dhexe, wuxuu horraantii sagaashamaadkii wax ka aasaasay ururka Somali African Muki Organization (SAMO) oo uu markii dambe ka noqday xoghaye guud. Wuxuu sidoo kale xilal ka soo qabtay isbaheysiyadii siyaasadeed ee SNA iyo SRRC.
Baarlamaankii ugu horreeyay ee uu xildhibaan ka noqday oo ahaa kii kumeel gaarka ahaa ee lagu dhisay dalka Kenya ayuu ka noqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad bishii Sabteembar 2004.
Wasiirkii arrimaha bulshada iyo dhaqancelinta ayuu ka soo noqday xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ee uu hoggaaminayay raysul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali sanadkii 2009.
Wuxuu muddo dheer xubin ka ahaa welina ka yahay jaamacadda Carabta. Wuxuu ka tirsan yahay Guddiga Arrimaha Dibadda iyo Amniga Qowmiyadaha Carabta.
Wuxuu ku caan-baxay
Waa fannaan qaada heeso ay Soomaalida jeceshahay oo ay ka mid yihiin heesaha Shankarroon, Barni iyo kuwo kale. Tartamadii heesaha hirgalay ee xilligii dowladdii kacaanka la qaban jiray mid ka mid ah ayuu ku soo baxay. Wuxuu Kalfadhi u sheegay in culeys uu waalidkiis kala kulmay dartii uusan uga mid noqon fannaaniinta heesaha badan qaada ee fanka uu shaqada u ahaa. Waalidkiis waxay aaminsanaayeen qofka fannaan noqda inuu la mid ahaa qof nolosha ku guul-darreystay.
Dalxa iyo siyaasadda
Xildhibaanka oo weli ka fiirsanaya xisbiga siyaasadda ee uu ka mid noqonayo ayaa sheegay in soo gelista siyaasadda ay ku dhalatay markii uu arkay burburka dowladda, uuna lagama maarmaan u arkay inuu ka qeyb qaato soo celinta qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya. Shirar badan oo dib-u-heshiisiin siyaasadeed ayuu ka qeybgalay, welina hami sare ayuu ka leeyahay siyaasadda dalka.